YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्दा के फाइदा हुन्छ?
तपाईंको भिडियोको खोजी ईन्जिन र्या .्कि Imp सुधार गर्नुहोस्
तपाईंको भिडियोमा टिप्पणी गर्न अरूलाई प्रोत्साहित गर्दछ
छलफल सुरु गर्न प्रोत्साहित गर्दछ
हामी तपाईंको भिडियो समीक्षा र गुणवत्ता टिप्पणी लेख्नुहोस्
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने तपाईं आफ्नै टिप्पणीहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ
टिप्पणीहरू धेरै दिनहरूमा फैलिन्छन्
प्रतिक्रियाहरू २--24२ घण्टामा सुरू हुन्छ
YouTube टिप्पणीहरू खरिद गर्ने तरिकाहरूले तपाईंको च्यानललाई अझ लोकप्रिय बनाउन मद्दत गर्न सक्छ
अहिलेको समयमा, युट्युबलाई विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने भिडियो स्ट्रिमिङ सेवाहरू मध्ये एक मानिन्छ। यसले वर्षौंमा घातीय वृद्धिको अनुभव गरेको छ र भिडियो सामग्री पोस्ट गर्न र हेर्नको लागि मनपर्ने गन्तव्य भएको छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरू जसले राम्रो संख्यामा फलोअरहरू जम्मा गर्न सक्षम थिए तिनीहरूले पनि यसबाट मुद्रीकरण लाभहरू प्राप्त गरेका छन्। त्यसकारण युट्युबले धेरै फाइदाहरू लिएर आउँछ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। निम्न मार्गदर्शिकाले तपाईंलाई सफल YouTube च्यानल निर्माण गर्न र यसबाट थप फाइदाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
सफल च्यानल निर्माण गर्नको लागि, तपाईंले लिनु पर्ने पहिलो चरण भनेको बलियो दर्शक आधार निर्माण गर्नु हो। युट्युबमा सब्सक्राइबर भनेर चिनिने दर्शकहरूले भिडियोहरूलाई लाइक, टिप्पणी गरेर र आफ्ना साथीहरूलाई रेफर गरेर तपाईंको च्यानलमा थप दृश्यता ल्याउनेछन्। यदि तपाइँ तपाइँको च्यानल लोकप्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँको ग्राहक आधार संग संलग्न हुन र तिनीहरूलाई सुन्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको च्यानलको सफलताको लागि टिप्पणीहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। तिमी सक्छौ YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहोस् YTpals बाट र टिप्पणी सेक्सनमा आफ्ना सदस्यहरूलाई संलग्न गर्न संयोजनमा निम्न रणनीतिहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रभावकारी टिप्पणी रणनीतिको महत्त्व के हो?
YouTube भिडियोहरू हेर्नको लागि मात्र होइन, यसले मानिसहरूलाई टिप्पणी खण्डमा पनि एकअर्कासँग अन्तरक्रिया गर्न अनुमति दिन्छ। टिप्पणीहरू सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूका लागि आफ्ना दर्शकहरूसँग संलग्न हुन र यसको विपरित उत्कृष्ट तरिका हो। यसले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूलाई तिनीहरूका सदस्यहरूले सामग्रीको बारेमा के भन्न चाहन्छन् सुन्न अनुमति दिन्छ। YouTube मा टिप्पणी खण्डले दर्शकहरूसँग सम्बन्ध निर्माण गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ। धेरै कमेन्ट भएका भिडियोहरूले धेरै हेराइहरू पाउँछन्। झन्डै ५ हजार कमेन्ट वा सोभन्दा बढी भिडियोमा १० लाख भ्युज हुने गरेको पाइएको छ । हेराइ र टिप्पणीहरू हातेमालोमा जान्छन्, किनकि एउटामा वृद्धिले अर्कोमा वृद्धि हुन्छ।
जब तपाइँ एक YouTube च्यानल सुरु गर्नुहुन्छ, प्राथमिक लक्ष्य प्लेटफर्ममा तपाइँको दृश्यता बढाउनु हो। टिप्पणीहरू दृश्यता बढाउनको लागि चालक शक्ति हुन्। टिप्पणीहरूले दर्शकहरूलाई सम्पूर्ण भिडियो हेर्न, भिडियो पुन: हेर्न र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग साझा गर्न प्रभाव पार्न सक्छ। एक प्रभावकारी टिप्पणी रणनीति केवल हेराइहरू प्राप्त गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण होइन तर दर्शकहरूलाई तपाईंको थप सामग्रीमा निर्देशित गर्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। राम्रो टिप्पणी रणनीतिले तपाईंलाई आफ्नो च्यानल मार्फत पठाउन चाहेको सन्देशलाई विस्तार गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
तपाईंको YouTube भिडियोहरूमा थप टिप्पणीहरू ड्राइभ गर्ने रणनीतिहरू
यदि तपाइँ तपाइँका दर्शकहरूबाट प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न र तपाइँका भिडियोहरू वरिपरि कुराकानी सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने टिप्पणीहरू धेरै उपयोगी साबित हुन सक्छन्। अब तपाईंले प्रभावकारी टिप्पणी रणनीतिको महत्त्व बुझ्नुभएको छ, हामी तपाईंको भिडियोहरूमा थप टिप्पणीहरू ड्राइभ गर्न प्रयोग गर्न सकिने केही विधिहरू हेरौं। तपाईं आफ्नो टिप्पणी रणनीति विकास गर्न यी विधिहरूको कुनै पनि संख्या प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रक्रियामा मद्दत गर्न तपाईंले YouTube टिप्पणीहरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ।
1. भिडियोहरूको अन्त्यमा प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।
तपाईंले सधैं भिडियोहरूको अन्त्यमा आफ्ना दर्शकहरूबाट केही प्रश्नहरू सोध्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यी प्रश्नहरू खुला-समाप्त हुन सक्छन्, तथापि, दर्शकहरूलाई टिप्पणी गर्न प्रेरित गर्ने विशेष प्रश्नहरू यस अवस्थामा तपाईंको लागि थप लाभदायक हुनेछन्। यदि तपाइँको ट्यूटोरियल भिडियो हो भने, तपाइँ दर्शकहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले सुझावहरू उपयोगी पाउनुभयो वा होइन। तपाईंले दर्शकहरूलाई उनीहरूले हेर्न चाहेको सामग्रीको प्रकारको बारेमा सोधेर पनि संलग्नता बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंले टिप्पणी सेक्सनमा केही ग्यारेन्टी प्रतिक्रियाहरू पाउनुहुनेछ। न केवल तपाईंले भविष्यका भिडियोहरूको लागि केही उत्कृष्ट विचारहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, तर तपाईं थप व्यक्तिगत स्तरमा आफ्ना सदस्यहरूसँग जडान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
2. टिप्पणी खण्डमा पहिलो टिप्पणी गर्नुहोस्।
कहिलेकाहीँ, तपाईका अनुयायीहरूलाई थप टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न प्रोत्साहित गर्ने उत्तम तरिका भनेको पहिलो टिप्पणी आफैं गर्नु हो। तपाईंले नेतृत्व लिन सक्नुहुन्छ र सदस्यहरूलाई संलग्न गराउने र भिडियोको बारेमा कुराकानी सुरु गर्ने टिप्पणी पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। समय बित्दै जाँदा, तपाईंका सदस्यहरू तपाईंका भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्न थप सहज हुनेछन्। उही रणनीति प्रयोग गर्ने अर्को तरिका भनेको तपाईंले व्यक्तिगत रूपमा चिन्ने व्यक्तिलाई टिप्पणी छोड्न सोध्नु हो। यो टिप्पणी रणनीति पनि काम गर्दछ। साथीहरू र परिवारद्वारा पोस्ट गरिएका टिप्पणीहरूले ग्राहकहरूलाई थप टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। यस तरिकाले, तपाइँ एक नजिकको समुदाय निर्माण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन दैनिक आधारमा एक अर्कासँग अन्तरक्रिया गर्दछ।
३. संलग्नता बुझ्नको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सामग्री अवलोकन गर्नुहोस्।
कुन भिडियोहरूले सबैभन्दा बढी संलग्नता देख्यो भनेर निर्धारण गर्न तपाईंले YouTube विश्लेषण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछि, तपाईले कारकहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जसले ठूलो संलग्नता निम्त्याउँछ। चाहे त्यो भिडियोको लम्बाइ होस् वा निश्चित प्लेलिस्टहरू। यो फेला परेको छ कि2मिनेट भन्दा छोटो भिडियोहरूले 5-मिनेट भिडियोहरूको तुलनामा सामान्यतया ठूलो संलग्नता दरहरू प्राप्त गर्दछ। एकचोटि तपाईंले आफ्ना भिडियोहरूलाई राम्रो प्रदर्शन गर्ने कारकहरू पत्ता लगाइसकेपछि, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो नयाँ भिडियोहरूमा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। यसले दर्शकहरूलाई व्यस्त राख्नेछ र टिप्पणीहरू आइरहेका छन्।
४. YouTube मा प्रतियोगिताहरू होल्ड गर्नुहोस्।
इन्स्टाग्राम र फेसबुक प्रतियोगिताहरू जस्तै, तपाइँ तपाइँको च्यानलको लागि संलग्नता ड्राइभ गर्न, YouTube मा पनि प्रतियोगिताहरू राख्न सक्नुहुन्छ। YouTube प्रतियोगिताहरू तपाईंको भिडियोमा टिप्पणीहरू, सदस्यहरू, र लाइकहरू प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो, सबै एकै समयमा। जे होस्, तपाइँलाई केहि अतिरिक्त कोष चाहिन्छ र तपाइँ प्रतियोगिता को प्रवर्द्धन गर्न को लागी प्रयास को एक महत्वपूर्ण मात्रा मा राख्नु पर्छ। YouTube प्रतियोगिताहरू तपाईंको च्यानलमा केही ध्यान आकर्षित गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो, जसले लामो समयसम्म तपाईंको भिडियोहरूमा थप टिप्पणीहरू ल्याउनेछ। तपाइँ तपाइँका दर्शकहरूलाई प्रतियोगिताको भागको रूपमा टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ।
5. सब्सक्राइबरहरूको टिप्पणीहरू मन पराउनुहोस्।
तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई तपाइँको भिडियो अन्तर्गत पोस्ट गरेको टिप्पणी लाई लाइक गरेर थप व्यक्तिगत स्तर मा जडान गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ एक टिप्पणी लाइक गर्नुहुन्छ, दर्शकहरूले यसको छेउमा तपाइँको च्यानलको सानो आइकनको साथ रातो हृदय हेर्न सक्षम हुनेछन्। कमेन्ट पोस्ट गर्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो कमेन्ट लाइक गरेको सूचना प्राप्त गर्नेछ। एकचोटि दर्शकहरूले तपाईंलाई टिप्पणीहरूमा अरूसँग अन्तरक्रिया गरेको देखेपछि, उनीहरूलाई थप टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यस तरिकाले, तपाईं प्रशंसक वफादारी निर्माण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र तपाईं आफ्ना दर्शकहरूको कदर गर्नुहुन्छ भनेर पनि देखाउनुहुनेछ।
6. केही टिप्पणीहरू पिन गर्नुहोस्।
तपाईंले निश्चित टिप्पणीहरू हाइलाइट गर्न सक्ने उत्कृष्ट तरिका पिनिङ हो। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि पिन गरिएको टिप्पणी पहिलो टिप्पणी हो जुन तपाइँका दर्शकहरूले तपाइँको भिडियोको तल देख्छन् जब उनीहरू टिप्पणी खण्ड तल स्क्रोल गर्छन्। तपाईं या त दर्शकहरूसँग कुराकानी सुरु गर्न वा सदस्यहरूको टिप्पणी पिन गर्न आफ्नै टिप्पणी पिन गर्न सक्नुहुन्छ। पिनिङ सुविधा यसको लागि उत्कृष्ट छ -
दर्शकहरूबाट विशेष प्रश्नहरू सोध्दै।
भिडियोको बारेमा स्पष्टीकरण दिँदै।
ईस्टर अण्डा वा केही विशिष्ट विकासको साथ दर्शकहरूलाई चिढाउने।
भिडियो हेरिदिनु भएकोमा दर्शकहरुलाई धन्यवाद ।
सदस्यहरूबाट सान्दर्भिक टिप्पणीहरू हाइलाइट गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले YouTube मा कुनै पनि शीर्ष-प्रदर्शन च्यानलहरू हेर्नुभयो भने, तपाईंले तिनीहरूमध्ये एउटा साझा कुरा पाउनुहुनेछ - स्थिरता। तपाइँको च्यानल को लागी संलग्नता ड्राइभ गर्न को लागी, तपाइँ लगातार अपडेट र बारम्बार भिडियो प्रकाशित गर्नुपर्छ। तपाइँ तपाइँको अर्को भिडियो कहिले अपलोड गर्नुहुन्छ भनेर दर्शकहरूलाई थाहा होस् भनेर कडा तालिका पालना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि, यसको मतलब यो हो कि तपाईंले यसको खातिर सामग्री मन्थन गर्नु पर्छ। यदि तपाइँको तालिकाले हरेक हप्ता एक भिडियो पोस्ट गरिरहेको छ भने, यो सामग्री दर्शकहरु को लागी आकर्षक बनाउन महत्त्वपूर्ण छ। यदि दर्शकहरूले तपाइँका भिडियोहरू रोचक र अद्वितीय पाउनुभयो भने, त्यसपछि टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न जारी रहनेछ।
8। CTA समावेश गर्नुहोस्
प्रत्येक भिडियोमा कल टु एक्शन (CTA) समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो भिडियोको कुनै पनि भागमा समावेश गर्न सकिन्छ, चाहे सुरुमा, अन्त्यको बीचमा। CTA को मुख्य उद्देश्य मानिसहरूलाई तपाइँको च्यानलको सदस्यता लिन सोध्नु हो। तपाइँ एनोटेसन सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र स्क्रिनको शीर्ष बायाँ कुनामा एउटा सानो बाकस राख्न सक्नुहुन्छ, तपाइँका दर्शकहरूलाई तपाइँको च्यानलको सदस्यता लिन सोध्नुहोस्। जब दर्शकहरूले समय-समयमा CTA देख्छन्, उनीहरूलाई तपाईंको च्यानलको सदस्यता लिन सम्झाइनेछ। तपाईंले सदस्यहरू कमाउँदा, तपाईंको भिडियोहरूको लागि टिप्पणीहरू र लाइकहरू स्वतः बढ्दै जानेछन्।
9. आफ्नो ब्लग र वेबसाइटमा YouTube विजेट प्रयोग गर्नुहोस्
तपाइँको YouTube च्यानल मा संलग्नता ड्राइभ गर्ने अर्को उत्कृष्ट तरिका तपाइँको ब्लग वा वेबसाइट मा YouTube विजेट राखेर हो। युट्युब विजेट नयाँ सब्सक्राइबरहरू ल्याउनको लागि उत्कृष्ट तरिका हुनेछ किनकि तपाईंको ब्लग फलोअरहरू र वेबसाइट आगन्तुकहरूले तपाईंको YouTube च्यानलको बारेमा जान्न पाउनेछन्। यदि तिनीहरूले अन्य माध्यमहरूमा तपाईंको सामग्री पछ्याउनुहोस् भने, तिनीहरूले तपाईंको YouTube च्यानलको सदस्यता लिने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले, बारीमा, उनीहरूलाई तपाइँको YouTube च्यानलमा टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न अनुमति दिनेछ किनकि उनीहरूले तपाइँसँग व्यक्तिगत स्तरमा अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पाउनेछन्।
२. एक नेटवर्क निर्माण गर्नुहोस्
यदि एक सदस्यले तपाइँको च्यानल मनपर्छ भने, त्यहाँ एक मौका छ कि उनीहरूले अन्य सम्बन्धित च्यानलहरू पनि मन पराउन सक्छन्। YouTube ले सिर्जनाकर्ताहरूलाई सिफारिस पृष्ठमा अन्य YouTubers च्यानलहरू थप्न अनुमति दिन्छ। त्यसै गरी, तपाइँ अन्य सम्बन्धित च्यानलहरूलाई सिफारिस पृष्ठमा तपाइँको च्यानल फिचर गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ ताकि उनीहरूका दर्शकहरूलाई तपाइँको च्यानलको सदस्यता लिन उत्प्रेरित होस्। यस तरिकाले, तपाईंले आफ्नो च्यानलको लागि धेरै हेराइहरू, सदस्यहरू, र टिप्पणीहरू आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
11. सदस्यहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुहोस्।
यो एक स्पष्ट रणनीति जस्तो देखिन्छ, कि तपाइँका सदस्यहरु को टिप्पणी को जवाफ मा अधिक टिप्पणीहरु आकर्षित हुनेछ। जब तपाइँ दर्शकहरूको टिप्पणीहरूको जवाफ दिनुहुन्छ, यो पनि देखाउँछ कि तपाइँ उनीहरूलाई सुन्दै हुनुहुन्छ र तपाइँ उनीहरूको प्रतिक्रियामा रुचि राख्नुहुन्छ। दर्शकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न तपाईंले आदर्श रूपमा हरेक दिन केही मिनेट निकाल्नुपर्छ। तपाईंको च्यानलमा टिप्पणी गर्नुको अलावा, अन्य सम्बन्धित च्यानलहरूको टिप्पणी सेक्सनहरूमा पनि दर्शकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नु राम्रो विचार हुनेछ। यदि यी दर्शकहरूलाई तपाईंको टिप्पणीहरू रोचक लाग्छ भने, तिनीहरूले तपाइँको प्रोफाइल मार्फत जाने प्रयास गर्नेछन्। यस तरिकाले, तपाइँ नयाँ सदस्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
12. प्रभावकारी रूपमा कीवर्डहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ तपाइँको YouTube च्यानलमा सही संलग्नता ड्राइभ गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा प्रभावकारी रूपमा कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ जब एक व्यक्ति विशेष रूपमा केहि खोज्दैछ। यदि तपाइँ सही किवर्डहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँका भिडियोहरू सही दर्शकमा पुग्ने सम्भावना बढ्छ। यो फेला परेको छ कि च्यानलमा 60% भन्दा बढी नयाँ सदस्यहरू सामान्यतया YouTube खोज विकल्पबाट आउँछन्। यदि तपाइँ सही कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्न वा तपाइँका कुञ्जी शब्दहरू पातलो रूपमा फैलिएका छन् भने, तपाइँका भिडियोहरू खोज परिणामहरूमा नदेखिन सक्छन्। कीवर्ड ट्यागहरू सिर्जना गर्दा यो सम्भव भएसम्म वर्णनात्मक हुन महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँ कुञ्जी शब्दहरूको लागि सुझावहरू फेला पार्न अनलाइन उपकरणहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
13. च्यानल प्रचार।
तपाईंको च्यानललाई YouTube मा मात्र होइन तर बाहिर पनि प्रचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसले विभिन्न माध्यमबाट दर्शकहरूलाई तपाइँको YouTube च्यानल खोल्नेछ। तिनीहरूले तपाईंको भिडियो सामग्री पछ्याउन थालेपछि, तिनीहरूले टिप्पणी गर्न, साझेदारी गर्न, र तपाईंका भिडियोहरू मन पराउन सुरु गर्नेछन्। तपाइँ तपाइँको YouTube च्यानल मार्केट गर्न सक्ने केहि तरिकाहरू निम्न छन् -
आफ्नो सामाजिक मिडिया पृष्ठहरूमा आफ्नो YouTube च्यानल लिङ्क गर्नुहोस्।
सामाजिक बुकमार्क वेबसाइटहरूमा YouTube च्यानल पेश गर्नुहोस्।
भिडियो खोज इन्जिनहरूमा च्यानल थप्नुहोस्।
मेलिङ सूचीहरूमा आफ्नो YouTube च्यानलमा लिङ्क संलग्न गर्नुहोस्।
ब्लगहरूमा टिप्पणीहरू पोस्ट गर्दा तपाईंको YouTube URL प्रयोग गर्नुहोस् र यस्तै।
14. तपाईंको भिडियो सामग्रीको लागि रोचक थम्बनेलहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाइँ नयाँ सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँको थम्बनेलहरू अलग छन्। यदि मानिसहरूले थम्बनेल चाखलाग्दो फेला पारेमा तपाईंको भिडियोमा क्लिक गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यद्यपि, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आफ्नो थम्बनेलको रूपमा क्लिकबेट छविहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। यदि तपाइँ क्लिकबाइट रणनीति प्रयोग गर्नुहुन्छ भने दर्शकहरूले तपाइँको च्यानललाई पछ्याउने सम्भावना छैन। चाखलाग्दो थम्बनेल समावेश गर्ने मुख्य उद्देश्य तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको विचारहरू बढाउनु हो। यदि तपाइँ दर्शकहरूलाई राम्रो सामग्री प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, दृश्यहरूले टिप्पणीहरू र लाइकहरू पनि ल्याउनेछन्।
15. तपाईंको टिप्पणीहरू फिल्टर गर्ने नयाँ सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्
YouTube स्टुडियो (डेस्कटप) मा एक नयाँ सुविधाले तपाईंलाई आफ्नो च्यानलमा टिप्पणीहरू फिल्टर गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ यसलाई विशेष टिप्पणीहरू खोज्न र खोजीलाई परिमार्जन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसको आधारमा -
च्यानलको सदस्यको स्थिति।
टिप्पणीकर्ताको सदस्य संख्या।
तपाईंले विशेष प्रश्नहरू भएका टिप्पणीहरू हेर्न फिल्टर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईं तिनीहरूलाई अझ सजिलैसँग जवाफ दिन सक्षम हुनुहुन्छ। यस बाहेक, तपाईंले यो सुविधा प्रयोग गरी तपाईंसँग भएका वा प्रतिक्रिया नगरेका टिप्पणीहरूको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, तपाइँ YTpals बाट YouTube टिप्पणीहरू किन्न सक्नुहुन्छ। YouTube टिप्पणीहरू खरिद गर्नु तिनीहरूको लागि एक उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ जसले भर्खरै आफ्नो YouTube यात्रा सुरु गरेका छन्, किनकि केही दर्शकहरूले कुनै टिप्पणी नभएका भिडियोहरूमा टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न सुरुमा अनिच्छुक हुन सक्छन्। यो स्थापित खाताहरूको लागि पनि राम्रो विकल्प हो, किनकि तपाइँ माथि उल्लिखित रणनीतिहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाइँलाई प्रक्रियामा मद्दत गर्न YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहुन्छ।
तपाईंले YouTube टिप्पणीहरू किन किन्नु पर्छ?
अब जब तपाईं आफ्नो च्यानलमा टिप्पणीहरूको संख्या बढाउने रणनीतिहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ, यो YouTube टिप्पणीहरू खरिद गर्ने महत्त्वलाई हेर्ने समय हो। सामाजिक सञ्जालको संसारमा आज तीव्र प्रतिस्पर्धा छ, र यूट्यूब जस्ता सोशल मिडिया च्यानलहरू मार्फत लोकप्रियता प्राप्त गर्न गाह्रो भएको छ। यो किनभने धेरै राम्रो स्थापित सेलिब्रेटीहरू पनि सामग्री सिर्जना गर्न YouTube जस्ता प्लेटफर्महरूमा फर्किरहेका छन्। यसैले यो रणनीतिहरूमा सुधार गर्न र अनुयायीहरूबाट संलग्नता ड्राइभ गर्न नयाँ तरिकाहरू खोज्न महत्त्वपूर्ण छ।
यदि तिमी YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहोस् YTpals जस्ता सेवा प्रदायकहरूबाट, तपाईंले आफ्नो च्यानलको सफलता बढाउन सक्षम हुनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी YouTube टिप्पणीहरू खरिद गर्दा केही फाइदाहरू हेरौं।
1. तपाईंका भिडियोहरूको पहिचान बढाउनुहोस्।
तपाईंले दर्शकहरूबाट केही मान्यता पाएपछि मात्र YouTube का विभिन्न फाइदाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँको भिडियो पहिचान हुने सम्भावना बढ्छ। यदि तपाइँ YouTube मा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँका भिडियोहरूले पर्याप्त सदस्यहरू, लाइकहरू र टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। टिप्पणीहरू खरिद गर्नाले कामलाई सजिलो बनाउँछ, किनकि धेरै टिप्पणीहरूले थप हेराइ र लाइकहरू पनि ड्राइभ गर्छ। यद्यपि तपाइँका भिडियोहरूले YouTube सेलिब्रेटीहरूले प्राप्त गर्ने कमेन्टहरू प्राप्त गर्न नसक्ने भए पनि, YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्दा दर्शकहरूको नजरमा तपाइँको च्यानलको पहिचान निश्चित रूपमा बढ्छ।
2. तपाईंको YouTube च्यानलको श्रेणी बढाउनुहोस्
YouTube मा, च्यानलहरूको श्रेणीकरण सामान्यतया च्यानलको सदस्य संख्या द्वारा निर्धारण गरिन्छ। प्रत्येक भिडियोमा कमेन्ट र लाइकको सङ्ख्याको आधारमा सदस्य फरक हुन सक्छ। यही कारणले गर्दा लाइक र कमेन्टको संख्यामा भएको वृद्धिले युट्युबमा च्यानलको श्रेणीमा समानुपातिक वृद्धि हुन्छ। यसले YouTube च्यानलको सफलताको लागि टिप्पणीहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने तथ्यलाई संकेत गर्दछ। जब तपाइँ YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ थप सदस्यहरू प्राप्त गर्ने मौकाहरू बढाएर तपाइँको च्यानलको श्रेणी बढाउन सक्नुहुन्छ।
3. तपाईंको भिडियोहरू भाइरल बनाउनुहोस्
प्रत्येक YouTuber ले आफ्नो सामग्री भाइरल होस् भन्ने चाहन्छ, तथापि, त्यो हासिल गर्नको लागि कुनै सेट सूत्र छैन। भाइरल सामग्री सिर्जना गर्न, एक निर्माताले धेरै समय लगानी गर्नुपर्छ र भिडियो वरिपरि बज सिर्जना गर्न विभिन्न माध्यमहरूमा प्रचार गर्नुपर्छ। यद्यपि त्यहाँ भाइरल प्राप्त गर्ने कुनै निश्चित तरिका छैन, YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्दा निश्चित रूपमा प्रक्रियामा मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंले YouTube टिप्पणीहरू खरिद गरेपछि, तपाईंको भिडियो धेरै मानिसहरूलाई हाइलाइट गरिनेछ। जति धेरै मानिसहरूले तपाईंको भिडियोहरूमा क्लिक गर्छन्, थप टिप्पणीहरू आउन थाल्छन्। दर्शकहरूले च्यानलको सदस्यता लिनु अघि नै टिप्पणी खण्ड सबैभन्दा पहिलो कुरा हो। त्यसैले टिप्पणीहरू खरिद गरेर एक प्रभावशाली टिप्पणी खण्डले तपाईंलाई थप दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।
४. थप क्लिक र लाइकहरू प्राप्त गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको च्यानल YouTube मा लोकप्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि यसले धेरै क्लिकहरू, टिप्पणीहरू, र लाइकहरू प्राप्त गर्दछ। मानिसहरूलाई तपाईंको भिडियोहरू हेर्नको लागि प्राप्त गर्ने प्रक्रिया लामो र कठिन हुन सक्छ। यद्यपि, त्यहाँ तरिकाहरू छन् जुन तपाइँ प्रक्रियालाई उत्प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको लोकप्रियता किकस्टार्ट गर्न को लागी एक उत्तम तरिका YouTube टिप्पणीहरु खरिद गरेर हो। एकचोटि तपाईंले YouTube मा टिप्पणीहरू किन्नुभएपछि, धेरै मानिसहरूले तपाईंको भिडियोमा क्लिक गर्न थालेपछि हेराइहरू र लाइकहरू स्वचालित रूपमा आउनेछन्। यो किनभने तपाईंको भिडियोहरूमा टिप्पणीहरूको राम्रो संख्याले खोज परिणामहरूमा देखा पर्ने सम्भावना बढाउँछ।
5. नयाँ सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्
YouTube को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष दर्शक र सदस्यहरू हुन्। तपाईंका सबै रणनीतिहरू अन्ततः तपाईंको च्यानलमा थप दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ। तपाईंको च्यानलमा जति धेरै दर्शक र सदस्यहरू छन्, उति धेरै दर्शकहरूलाई तपाईं आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने कुरा प्रचलित तथ्य हो। तपाइँको भिडियोहरूमा टिप्पणीहरूको संख्याले तपाइँको अन्त्यमा भ्यूहरूको संख्या पनि निर्धारण गर्दछ। YTpals बाट टिप्पणीहरू खरिद गर्नाले यस प्रक्रियामा मद्दत गर्न सक्छ र यसले तपाईंको कामलाई सजिलो बनाउन सक्छ। तपाइँको च्यानल भ्रमण गर्ने दर्शकहरूले तपाइँको च्यानलमा पहिले देखि नै टिप्पणीहरूको संख्याको नोट लिने हुनाले तपाइँ नयाँ सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
6. सामाजिक प्रमाण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ
सामाजिक प्रमाण सामाजिक मिडिया को दुनिया मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो एक ज्ञात तथ्य हो कि मानिसहरू सामान्यतया केहि सामाजिक स्थिति भएका च्यानलहरूमा ध्यान दिन्छन्। जब धेरै दर्शकहरूले तपाईंको YouTube च्यानलले प्रचार गर्ने अवधारणा वा विचारलाई विश्वास गर्छन्, नयाँ दर्शकहरू स्वचालित रूपमा भित्रिनेछन्। सामाजिक प्रमाणको कारण, यी नयाँ दर्शकहरूले च्यानललाई आफ्नो समर्थन विस्तार गर्न थप इच्छुक हुनेछन्। तपाईंले साइटमा सामाजिक प्रमाण सिर्जना गर्न YouTube टिप्पणीहरू किन्न सक्नुहुन्छ। एक पटक दर्शकहरूले तपाईंको भिडियोहरूमा टिप्पणीहरू हेरेपछि, तिनीहरू तपाईंको थप सामग्री हेर्न इच्छुक हुनेछन्।
7. नकारात्मक टिप्पणीहरू डुबाउनुहोस्
अक्सर, मानिसहरूले YouTube भिडियोहरूमा धेरै नकारात्मक र घृणित टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न सक्छन् जुन सामग्रीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। धेरै व्यक्तिहरूले दुश्मनी र पूर्वाग्रहलाई बढावा दिन YouTube प्रयोग गर्छन्। यो जहाँ YouTube टिप्पणीहरू खरिद गर्न उपयोगी हुनेछ। तपाइँ यी टिप्पणीहरू रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तथापि, तपाइँ आवाजलाई डुबाउने अर्को रणनीति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ YouTube टिप्पणीहरू खरिद गर्नुहुन्छ, तपाइँ निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि सकारात्मक टिप्पणीहरूले यी नकारात्मक टिप्पणीहरूलाई छाया पार्छ, जसले तपाइँको भिडियोहरूलाई लामो समयसम्म हानि पुर्‍याउन सक्छ। इन्टरनेट ट्रोलहरूलाई खाडीमा राख्नको लागि यो उत्कृष्ट रणनीति हो र तिनीहरू घृणित टिप्पणीहरूबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछैनन्।
8. प्लेटफर्ममा प्रभाव उत्पन्न गर्नुहोस्
जब तपाइँ YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँको भिडियो प्लेटफर्ममा मान्यता प्राप्त गर्न सुरु हुनेछ। जति धेरै मानिसहरूले तपाइँको भिडियोहरू हेर्न थाल्छन्, यसले तपाइँलाई स्पेसमा तपाइँको स्थिति विस्तार गर्न अनुमति दिनेछ। हेराइको ठूलो संख्या भनेको अधिक लाइक, अधिक टिप्पणीहरू, र अधिक सदस्यहरू हो। र तपाईंको भिडियोहरूमा थप सदस्यहरू र टिप्पणीहरूको साथ, अतिरिक्त दर्शकहरूलाई पनि तपाईंको सामग्रीको सदस्यता लिन र टिप्पणीहरू पोस्ट गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यो चक्र जारी रहनेछ र तपाईं केही समयमै उचाइमा पुग्न सक्षम हुनुहुनेछ। नतिजाको रूपमा, तपाईं प्लेटफर्ममा केही प्रभाव अभ्यास गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंले YouTube बाट मुद्रीकरण लाभहरू मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन, तर क्लाउटले तपाईंलाई नयाँ साझेदारीहरू निर्माण गर्न र थप अवसरहरू अन्वेषण गर्न मद्दत गर्नेछ।
9. टिप्पणी र विचारहरूको समानुपातिक वृद्धि सिर्जना गर्दै
यदि तपाईंले विगतमा YTpals बाट YouTube भ्युहरू किन्नुभएको छ भने, यो YouTube टिप्पणीहरू पनि खरीद गर्न अर्थपूर्ण हुनेछ। जब मानिसहरूले तपाईंको च्यानल हेर्छन्, तिनीहरूमध्ये केहीले केही टिप्पणीहरू छोड्ने सम्भावना हुन्छ। यदि हेराइ र टिप्पणीहरू बीचको अनुपात ठूलो मार्जिनले बन्द छ भने यसले तपाईंको च्यानलमा राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्दैन। तपाईंले आफ्नो भिडियोमा भएका हेराइहरूको सङ्ख्यासँग मेल खाने YouTube टिप्पणीहरू खरिद गरेर यो अवस्थाको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको हेराइ र टिप्पणीहरू अधिक प्रामाणिक देखिन्छ, मानिसहरूलाई तपाईंको च्यानल फलो गर्न र भिडियोहरूमा टिप्पणीहरू र लाइकहरू छोड्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
10. आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइट मा अधिक यातायात प्राप्त गर्नुहोस्
तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत वेबसाइटमा ट्राफिक ड्राइभ गर्न तपाइँको YouTube च्यानल को सफलता को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ YTpals जस्ता भरपर्दो स्रोतबाट YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहुन्छ, यो दिइएको छ कि तपाइँ अधिक लाइक, हेराइ, र सदस्यहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईंको ग्राहक आधार बढ्दै जाँदा, तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा ट्राफिक प्रवर्द्धन गर्न साइटमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको YouTube च्यानलले तपाईंले उत्पादन गर्ने सामग्रीको प्रकारमा रुचि राख्ने मानिसहरूलाई लक्षित गर्न अनुमति दिनेछ।
तपाइँको YouTube भिडियोहरूमा टिप्पणीहरू ड्राइभ गर्ने माथि उल्लिखित रणनीतिहरूबाट, YouTube स्पेसमा टिप्पणीहरू कत्तिको महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने स्पष्ट रूपमा स्पष्ट हुन्छ। यदि तपाईं प्लेटफर्ममा नयाँ हुनुहुन्छ र आफ्नो लागि एउटा स्थान बनाउन संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले YTpals को YouTube टिप्पणीहरू किन्नुहोस् सेवाबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ YTpals जस्ता विश्वसनीय स्रोतबाट YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहुन्छ, तपाइँ माथि उल्लिखित सबै लाभहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। YTpals ले तपाईंको भिडियोको समीक्षा गर्छ र उच्च गुणस्तरको प्रामाणिक टिप्पणीहरू लेख्छ। तपाईंसँग आफ्नै टिप्पणीहरू पेश गर्ने विकल्प पनि छ। सेवा अर्डर राखेको 24-72 घण्टा भित्र सुरु हुनेछ, र टिप्पणीहरू धेरै दिनमा फैलिनेछ।
YTpals ले तपाईंको YouTube च्यानललाई अझ सफल बनाउन प्रिमियम सेवाहरूको दायरा प्रदान गर्दछ। थप जान्नको लागि, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस आज!
YouTube टिप्पणीहरू तपाईंको कार्टमा थपिएको छ।